जेएस अटो प्रालि कानपुर (भारत)
जेएसए अटोको विशेषता के हो ?
जेएसए टेम्पो निम्न मध्यमवर्गीय परिवारहरूका लागि निर्माण गरिएको टेम्पो हो । यसको मुख्य विशेषता भनेको नै चारपांग्रे गाडीको सुविधा पाइने तीनपांग्रे सवारी साधन हो । जेएसए अटो टेम्पोमा ड्राई क्लच प्लेट हुन्छ । यसले इञ्जिनको तान्न सक्ने क्षमता बढी हुन्छ । यसले मर्मतलाई कम खर्चिलो बनाउँछ । ह्याभी डिउटी डिफेन्सर, अटो एड्जस्टिङ ब्रेक, ११ लिफ स्प्रिङ र चेचिस फ्रेममा निर्माण गरिएको हुन्छ । खासगरी निम्न आय भएका र लगानी पनि गर्न नसक्नेहरूका लागि कम लगानीमा स्वरोजगार बनाउने तीनपांग्रे साधन हो । जेएसए अटो टेम्पो ।
जेएसए टेम्पोको नेपाली बजारमा माग कस्तो छ ?
हेर्नुस, हामीले नेपाली बजारको माग अनुसारकै टेम्पो निर्माण गरेको र कम मूल्यमा चारपांग्रे सवारी साधको जस्तै सिस्टम भएको टेम्पो हो । यसलाई बीएस (भारत स्टेट ३) र बीएस (भारत स्टेट ४) भनेर बनाएका छौं जुन अहिले बजारमा चलिरहेको यूरो–३ र यूरो–४ भनेर चिनिन्छि । नेपालमा पहिले बिएस ३ मोडलका अटो टेम्पो आउँथ्यो, अहिले बीएस ४ मोडलको टेम्पो आएको
नेपालमा जेएसए टेम्पोले सिट क्षमताभन्दा बढीको अनुमति लिएको छ भनेर सञ्चार माध्यममा आएको छ नि ?
नेपाल सरकारको नियमानुसार जेएसए कम्पनीले निर्माण गरेको बिएस ४ टेम्पोमा अहिले ५८ इन्च चौडाइको बडी छ । नेपालीहरूको शारीरिक बनोट औसतमा एक जनाको १४ इन्च हुन्छ । १४ इन्चको हिसाबले एकतर्फ ४ जना र अर्कोतर्फ ४ जना गरी ८ जनासम्म बस्न सकिन्छ । यसरी नेपालमा यो टेम्पोले ९ देखि १० जनासम्म बस्न सक्ने क्षमताको गाडी छ । हामीले यसलाई ८ मा १ सिटको अनुमति लिएका छौं । त्यसैले ८ मा १ सिटको क्षमतामा यात्रु राखेमा खास फरक पर्दैन । नेपालका प्राविधिकहरूका अनुसार हाम्रो एसए टेम्पो ९ मा १ सिट सम्मको क्षमताको छ । तर, हामीले ८ मा १ सिटको मात्रै अनुमति लिएका छौं । बजारको हल्ला गलत हो ।
नेपाली बजारमा जेएसए टेम्पो नै रोज्नुपर्ने किन ?
निकै महत्वपूर्ण प्रश्न गर्नुभयो । अहिले बजारमा विभिन्न थरीका टेम्पोहरू आएका छन् । प्रतिस्पर्धी बजारमा सबै ग्राहकको एउटै रोजाई पनि हुन्न । तर, जेएसए अटो प्रालिले खासगरी नेपालकै लागि भनेर यो टेम्पो निर्माण गरेका छौं । नेपालका निम्न वर्गका नागरिकहरूको पनि सवारीसाधनमा सहज पहुँच तथा आरामदायी यात्राका लागि विशेष ध्यान दिएर बनाएका छौं । सस्तो, बलियो र
भरपर्दो तीन पांग्रे सवारी साधन आकर्षक पनि छ । त्यसैले नेपाली बजारमा जेएसए टेम्पो नै मन पराउछन् भन्ने हाम्रो विश्वास हो । अहिलेसम्मको नेपाली बजारमा आएको मागले पनि हामीलाई थप हौसला मिलेको छ ।
नेपालमा तपार्इंहरूको मुख्य बजार कहाँ–कहाँ हो ?
अहिले खासगरी हाम्रो वीरगन्ज, इटहरी, विराटनगर, जनकपुर लगायतका सहरहरूमा छ । पश्चिममा धनगढी, दाङ, तुलसीपुर घोराही, लमहीतर्फ पनि हामी बजार विस्ता गर्ने तयारीमा छौं । नेपालको अहिले प्रदेश १, २ र ३ मा बढी केन्द्रीत भएका छौं । यहाँको बजारको अवस्था पनि राम्रै पाएका छौं ।